ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲဆန္ဒပေး ရွေးချယ်ကြမလား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲဆန္ဒပေး ရွေးချယ်ကြမလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲဆန္ဒပေး ရွေးချယ်ကြမလား။
Posted by ကြယ်လေး on Jan 9, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi |6comments
Aung San Su Kyi The Guardian ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ယခုနှစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ( ၈) ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်မည့် နှစ်တစ်ရာပြည့်မြောက် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့(100th Anniversary of International Women’s Day) အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဂုဏ်ပြုရည်စူးကာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇ ဘီလီယျံ အတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများထဲမှ အအောင်မြင်ဆုံး ထင်ပေါ်အကျော်ကြားဆုံး အမျိုးသမီး အယောက် (၁၀၀) ဦးရေစာရင်းကိုရွေးချယ်သွားဖို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာကျော် The Guardian သတင်းဌာနကြီးမှ ဖိတ်ခေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
The Guardian သတင်းဌာနကြီးရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာဖိတ်ခေါ်ချက်ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ အအောင်မြင်ဆုံး အထင်ပေါ်အကျော်ကြားဆုံး ထိက်တန်းအမျိုးသမီး အယောက် (၁၀၀) ကို ရွေးချယ်ဖို့ အတွက် မည်သူမဆို မိမိတို့ မဲဆန္ဒပေးရွေးချယ်ဖို့အောက်ဖေါ်ပြပါ လင့်ခ်မှာ
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/signup/2011/jan/07/top-100-women-nominations မဲဆန္ဒပေးဖို့ကြေညာထားပါတယ်။
The Guardian သတင်းဌာနကြီးရဲ့ဒီ ထုတ်ပြန်ကြေညာဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီး ရှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်လွှာများပါဝင်တဲ့ သတင်းဓါတ်ပုံတစ်ခု ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ Hillary Clinton, Beyoncé, Michelle Bachelet, Oprah Winfrey, Margaret Thatcher, JK Rowling, Tanni Grey-Thompson and Aung San Suu Kyi ဆိုပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားတာ တွေ့ ရှိ ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေနဲ့The Guardian သတင်းဌာနကြီးရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ အတူ နှစ်တစ်ရာပြည့်မြောက် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့(100th Anniversary of International Women’s Day) အထိမ်းအမှတ်အတွက် ကမ္ဘာ့ အအောင်မြင်ဆုံး ထင်ပေါ်အကျော်ကြားဆုံး အမျိုးသမီး အယောက် (၁၀၀) ဦးရေစာရင်းကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင် ရွေးချယ်လိုတဲ့ဆန္ဒ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/signup/2011/jan/07/top-100-women-nominations မှာ သွားရောက်ရွေးချယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပဲဗျို့…ကြယ်လေးရေ…ကျွန်တော်ကတော့ အပြေးအလွှားသွားပြီးတော့ အမေ့ကို မဲပေးခဲ့ပြီဗျို့….ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အမေ့ကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မဲပေးရခြင်းပါပဲ….ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မဲအပေးခြင်ဆုံးသူကတော့ အမေစုပါပဲ…
Thanks info.Now go to vote.
Thanks for your link ! i will vote my mom suu kyi .
me too … voted her!
Admin: board is kindly advised to post this page until the date is over.
Thanks for ur news.. already voted for our mother